ဆတ္တယ နာဒဠာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးကို ဝီကီစံနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ရန် လိုအပ်နေသည်။ အကယ်၍သင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါက ဤဆောင်းပါးအား တိုးတက်စေရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြင်ဆင်ပေးပါ။ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာတွင် အကြံပေးမှုများ ပါဝင်လိမ့်မည်။(၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၀)
ဆတ္တယ နြာယန နာဒဠာ
မဏိပါယ် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (အင်္ဂျင်နိယ)
University of ဝင်္ကဆင်-မေလဝေါကီး တက္ကသိုလ် (မဟာ)
သျှီကာဂို တက္ကသိုလ် (မဟာစီးပွားစီမံ)
ဒေါ်လာ သန်း ၃၈၀
အနုပမ နာဒဠာ (1992–present)
ဆတ္တယ နြာယန နာဒဠာ (/nəˈdɛlə/; ၁၉၆၇ အောက်တိုဘာ ၁၉ ဘွား) သည် ဣန္ဒိယ-အမေရိကန် စီးပွားရေးအမှုဆောင် ဖြစ်သည်။ မိုက္ခရိုဆော့၏ မှုဆောင်ချုပ်အရာကို စတိဘောမထံမှ ၂၁၀၄ ခုတွင် ဆက်ခံသည်။ 
မှုဆောင်ချုပ်မဖြစ်မီက ကုမ္ပဏီ၏ ကွန်ပျုတင်းပလက်ဖောင်းများ တည်ဆောက်လုပ်ပတ်ရေးအတွက် တာဝန်ရှိသည့် မိုက္ခရိုဆော့၏ ကလောက်နှင့် လုပ်ငန်းကြီးအုပ်စု၏ ဒုတိယအမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် လုပ်သည်။ 
၂.၁ ဆန်း မိုက္ခရိုစစ္စတံ
၂.၃ Boards and committees
၃ ဆုများ အသိအမှတ်ပြုမှုများ
နာဒဠာကို ဣန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဟိုဒ္ဒြာပါရ်ရှိ  တီဂူလူ ဟိန္ဒူမိသားစုမှ မွေးသည်။  မိခင် ပြုပ္ပဝတီမှာ သင်္သကရိုဋ်သင်ဆရာ ဖြစ်၍  ဖခင် ဘက္ခပုရံနာဒဠာယုဂန္ဒာမှာ ၁၉၆၂-ကျောင်းဆင်း ဣန္ဒိယအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိ ဖြစ်သည်။ 
ဘဂ္ဂမ်ပါတ်ရှိ ဟိုဒ္ဒြာပါရ်အစိုးရကျောင်း၌ တက်ပြီး  ၁၉၈၈ ခုတွင် ကာနတကရှိ မဏိပါယ်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (နောက် မန်ဂလောတက္ကသိုလ်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာ) မှ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာအင်္ဂျင်နိယဘွဲ့ ရသည်။  အမေရိကသို့ ပညာသင်ထွက်ပြီး ဝင်္ကဆင်-မေလဝေါကီးတက္ကသိုလ်၌ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာနှင့် မဟာဘွဲ့ ဆက်တက်သည်။  ၁၉၉၀ တွင် မဟာဘွဲ့ ရသည်။  နောက် မဟာစီးပွားစီမံဘွဲ့ကို သျှီကာဂိုတက္ကသိုလ် ဘုဘိဇနက်ကျောင်းမှ ၁၉၉၆ တွင်ရသည်။ 
၁၉၉၂ ခု၊ မိုက္ခရိုဆော့သို့ အလုပ်မဝင်မီတွင် ဆန်း မိုက္ခရိုစစ္စတံ၌ နည်းပညာဝန်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်ဝင်ခဲ့သည်။ 
မှုဆောင်ချုပ်အဖြစ် ပထမဆုံးအလုပ်စသောနေ့တွင် နာဒဠာအား မှုဆောင်ချုပ်ဟောင်းများဖြစ်သော ဘီလဂိတ် (ဘယ်)၊ စတိဘောမ (right) တို့နှင့်အတူ တွေ့ရစဉ်
Nadella leadsalive discussion on Microsoft’s cloud strategy in 2014 in San Francisco
Since becoming CEO, Nadella Microsoft stock had tripled by September 2018, witha27% annual growth rate.
Boards and committees[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၉၂ ခုတွင် ဖခင်၏ ကျောင်းဆင်းဘက်တဦး၏သမီး အဏိပါယ်ကျောင်း၌ပင် ပိသုကာပညာနှင့် ကျောင်းတက်ခဲ့သော အနုပမနှင့် လက်ထပ်သည်။  သားတယောက်၊ သမီးနှစ်ယောက် မွေးပြီး ဝါရှင်တံနယ် ကလိုက်ဟေး  နှင့် ဘဲလီဗူး  တို့တွင် နေကြသည်။ သားဖြစ်သူ ဇိန်မှာ မွေးရာပါ ဦးနှောက်ထိခိုက်မှုကြောင့် ခြေလက်မလှုပ်နိုင်။  ကဗျာအဖတ်သန်ပြီး အမေရိကန်နှင့် ဣန္ဒိယကဗျာများ ဖတ်သည်။ ဣန္ဒိယသားတို့ ညာဉ်အတိုင်း ခရစ်ကတ်လည်း ကစားသည်။  မေဂျာလိမှ ဘောလုံးအသင်းဖြစ်သော ဆီရတ္တယ်ဆောင်းဒါးအသင်းကို ဇနီးမောင်နှံတို့ တစိတ်တဒေသ ဝယ်ထားသည်။ 
"ရီဖျက်ကို နှိပ်" အမည်ရ စာအုပ်ကို ရေးထားပြီး သူ့ဘဝအကြောင်း၊ မိုက္ခရိုဆော့၌ ဖြတ်သန်းရပုံ၊ နည်းပညာက အနာဂတ်ကို ပုံဖော်နိုင်မည်ဟု မည်သို့ယုံကြည်ကြောင်းတို့ကို ထည့်သွင်းထားသည်။ ထိုစာအုပ်မှရသော အကျိုးအမြတ်ကို ပရဟိတအဖွဲ့များအား လှူသည်။ 
↑ Weinberger၊ Matt (September 25, 2017)။ Microsoft CEO Satya Nadella Once Gave Up His Green Card For Love။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Ovide၊ Shira (5 February 2014)။ Microsoft Board Names Satya Nadella as CEO။ The Wall Street Journal။ 19 October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Microsoft Board names Satya Nadella as CEO။ Microsoft.com (4 February 2014)။ 26 April 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Bhanver၊ Jagmohan S. (2014-11-10)။ Nadella: The Changing Face of Microsoft (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Hachette India။ ISBN 978-93-5009-891-2။
↑ ‘Studious, hardworking boy has achieved his goal,’ says Satya Nadella's dad။ DNA India (2013)။5February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ "When diversity is seen as discrimination"၊ Livemint။ 15 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "I had just emerged from teachingaclass in media studies at"၊ Seattle Weekly။ 14 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Remembering ex-bureaucrat BN Yugandhar"၊ The Hindu Business Line။ 16 September 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Civil List of Indian Administrative Service, Volume 10။ Ministry of Home Affairs, India။ 1965။ p. 331။ Yugandhar, Bukkapuram Nadella 1962 Andhra Pradesh
↑ "Satya Nadella's father BN Yugandhar passes away at the age of 82"၊ India Today။ 14 September 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Satya၊ Nadella။ "Well done Satya"၊5February 2014။5February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 22 February 2014။
↑ Anisha Dhiman (25 August 2015)။ 'Satya Nadella on the Meaning of Work': Satya Nadella။ Oxy။ 13 September 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Hess၊ Abigail (2018-04-05)။ How one high school produced the CEOs of Microsoft, Adobe and Mastercard (in en)။
↑ "MIT thrilled over Nadella being in race to head Microsoft"၊ DNA India။ Archived from the original on 29 August 2013။
↑ Timmons၊ Heather။ India’s MIT costs less than $6,000ayear—and look where it got Satya Nadella (in en)။
↑ I went to the United States right when Sachin Tendulkar started to play for India so I look at it and say, wow, I missed the entire Sachin era of Indian cricket။ 11 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Next Microsoft CEO could be UWM graduate။
↑ ၁၉.၀ ၁၉.၁ McCracken၊ Harry (15 December 2010)။ Microsoft's New CEO Satya Nadella: 10 Things to Know။ Time။4February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ The rise of Satya Nadella, the CEO who totally turned Microsoft around in5years and made it more valuable than Apple (4 February 2019)။ 13 February 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Satya၊ Nadella။ "Satya Nadella CEO"၊4February 2014။7February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on7February 2014။
↑ "Indo-American Satya Nadella in race to be Microsoft's new CEO"၊ Biharprabha News။ 30 January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 1 February 2014။
↑ Microsoft CEO Nadella Received $84.5 Million in 2016 Pay (3 October 2016)။5November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ] The New York Times Top 200 Highest-Paid CEOs။ equilar.com။ 18 August 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kyle Nazario (27 January 2014)။ Satya Nadella biography: Everything you need to know about Microsoft's new CEO။ IT PRO။
↑ Satya Nadella: Executive Profile & Biography။ Bloomberg BusinessWeek။ 1 March 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Equilar Atlas။ 28 February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Satya Nadella, President, Server & Tools Business၊ 2014-02-09 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး၊ 2017-06-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ Ohlheiser၊ Abby (2014-02-04)။ Microsoft Has Found Its New CEO: Satya Nadella (in en-US)။
↑ Microsoft names Satya Nadella new CEO (4 February 2014)။6February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 June 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Microsoft CEO Satya Nadella: women, don't ask foraraise (10 October 2014)။ 17 September 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Satya Nadella [satyanadella] (9 October 2014)။ Was inarticulate re how women should ask for raise. Our industry must close gender pay gap soaraise is not needed because ofabias #GHC14။
↑ Swisher၊ Kara (2014-10-09)။ Microsoft CEO Satya Nadella on Women Pay Gaffe: "I Answered That Question Completely Wrong." (in en)။
↑ O'Brien၊ Chris။ "Microsoft CEO Satya Nadella publicly debuts himself, Office for iPad"၊ Los Angeles Times၊ 27 March 2014။ 28 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 19 May 2016။
↑ Hempel၊ Jesse။ "Satya Nadella’s GotaPlan to Make You Care About Microsoft. The First Step? Holograms"၊ Wired၊ February 2015။ 28 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 25 September 2017။
↑ Clarke၊ Gavin။ "Big Azure? Microsoft and IBM ink deal on business cloud"၊ The Register၊ 22 October 2014။ 28 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 29 September 2017။
↑ Bort၊ Julie။ "Microsoft Partners With Dropbox"၊ Business Insider၊4November 2014။ 28 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 29 September 2017။
↑ Jackson၊ Joab။ "Microsoft (hearts) Linux, for Azure's sake"၊ PC World၊ 20 October 2014။ 28 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 22 October 2016။
↑ Microsoft just got its Linux Foundation platinum card, becomes top level member (in en)။
↑ Statt၊ Nick။ "Microsoft CEO Nadella wants to help the world 'to achieve more'"၊ CNET၊ 25 June 2015။ 28 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 29 September 2017။
↑ byNewsroom (2018-06-18)။ Satya Nadella: when empathy is good for business (in en)။
↑ Transforming culture at Microsoft: Satya Nadella setsanew tone (in en)။
↑ della Cava၊ Marco။ "Microsoft's Satya Nadella is counting on culture shock to drive growth"၊ USA Today၊ 20 February 2017။ 28 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 29 September 2017။
↑ Weinberger၊ Matt။ "Microsoft acquires Xamarin"၊ Business Insider၊ 24 February 2016။ 20 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on4July 2017။
↑ Wingfield၊ Nick။ "Microsoft Buys LinkedIn for $26.2 Billion, Reasserting Its Muscle"၊ The New York Times၊ 13 June 2016။ 20 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 September 2017။
↑ Satya Nadella (in en)။
↑ "Microsoft to acquire GitHub for $7.5 billion"၊ Microsoft News Center၊4June 2018။ 1 June 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ La Monica၊ Paul R.။ "Is Satya Nadellaabetter Microsoft CEO than Bill Gates?"၊ CNN၊ 1 December 2015။ 28 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on9August 2017။
↑ Fiegerman၊ Seth။ "Microsoft stock hitsanew all-time high. Here's why"၊ CNN၊ 21 October 2016။ 28 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 29 September 2017။
↑ Board of Directors။ Starbucks Investor Relations။2July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Board of Trustees။ Fred Hutchinson Cancer Research Center။2July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Microsoft CEO elected to University of Chicago Board of Trustees။ University of Chicago news။2July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Satya Nadella"၊ Time၊ 19 April 2018။2July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "FT Person of the Year: Satya Nadella"၊ Financial Times၊ December 19, 2019။6July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Businessperson of the Year 2019"၊ Fortune၊ 19 November 2019။2July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "IBLA 2020: Microsoft CEO Satya Nadella Wins Global Indian Business Icon"၊ CNN-News18၊ 29 February 2020။2July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nikhila Henry & Rohit P S, TNN။ Nadella's other passions: Cricket, running and pastries။ The Times of India။6February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3August 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ A Quick Download on Microsoft CEO Satya Nadella's $3.5M House in Washington (14 January 2016)။ 14 May 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Drusch၊ Andrea (2 April 2014)။ 10 things to know: Satya Nadella။2March 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Microsoft CEO Satya Nadella to employees on coronavirus crisis: ‘There is no playbook for this’။ Seattle Times (22 March 2020)။ 30 July 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ All for love: When Microsoft CEO Satya Nadella surrendered his Green Card for wife Anu။3November 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Evans၊ Jayda။ "Russell Wilson, Ciara, Macklemore, Microsoft CEO Satya Nadella and more join Sounders ownership"၊ The Seattle Times၊ August 13, 2019။ September 1, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Microsoft CEO Satya Nadella is writingabook called Hit Refresh (2016-06-29)။ 25 April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Microsoft CEO Satya Nadella Offers A Business-Like Memoir | Star2.com (2 February 2018)။ 12 February 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 February 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ With his new book, Satya Nadella takes control of the Microsoft narrative။ 11 February 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆတ္တယ_နာဒဠာ&oldid=652566" မှ ရယူရန်
၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ မှ ရှင်းလင်းရမည့် ဝီကီပီးဒီးယား စာမျက်နှာများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။